Homeအထွေထွေအထူးသတင်းများKonya ဓါတ်ရထားလေလံရလဒ် (အထူးသတင်းများ)
17 / 10 / 2012 Levent Ozen အထူးသတင်းများ, လေလံပွဲ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထားလေလံ, တည်ဆောက်နေလေလံ 3
တစ်ခုချင်းစီကိုလမ်းရထားကားတစ်စီး Konya BB 60, ကုန်စည်နာရီ 58 ၏ 1 11 အရေအတွက် Deray ကလောင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာပစ္စည်းဝယ်ယူရေး: 00 အဆိုပါ Konya မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအတွက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူများအတွက်တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်သည့်ဓါတ်ရထား Tool ကိုကလောင်အရေအတွက် 60 58 1 အပိုအစိတ်အပိုင်းများအပိုင်းပိုင်း Deray ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကောက်ချက်:
EUR 1 / 98.700.000 EUR (နှစ်ခုဗားရှင်း): SCO (ချက်သမ္မတနိုင်ငံ) တွင် 104.700.000)
2) PESA (ပိုလန်): 109 သန်း EUR
3) CNR (တရုတ်): EUR 110.294.788
4) Café (စပိန်): EUR 113.931.807
5) Astra (ရိုမေးနီးယား): EUR 121.740.488
6) Bombardier (ဂျာမနီ): EUR 160.315.533
အဆိုပါတင်ဒါရလဒ်များကိုစျေးနှုန်း 70 30% စျေးနှုန်း% ထက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များအဖြစ်değerledirilပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤသူတို့သည်ဒြပ်စင်နေသောခေါင်းစဉ်:
က) Delivery အချိန်
အသေးစိတ်ကိုလေလံ ဒီမှာ ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဘယ်သူမျှမနူးညံ့: 2012 / 121077
Izmir Tram လေလံရလဒ်များကို (အထူးသတင်းများ) 26 / 02 / 2014 Izmir ဓါတ်ရထားလေလံရလဒ်: Karşıyaka နှင့် Konak သည်လမ်းရထားစနစ်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များဝယ်ယူခြင်းအတွက် Izmir tram တင်ဒါကိုကျင်းပခဲ့သည်။ တင်ဒါတွင် 15 ကုမ္ပဏီမှပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ 595.746.142,84: 26.02.2014: တင်ဒါကြေငြာခဲ့ပြီးလေလံများကိုစတင်ခဲ့သည်။ Izmir Tram တင်ဒါဆောက်လုပ်မှု၏ရလဒ်နှင့်ယာဉ်စျေးနှုန်းများကိုရှာဖွေရန်။ ပထမပုံ (TL) သည်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြစ်ပြီးဒုတိယပုံ (EUR သို့မဟုတ် TL) သည်လမ်းရထား၏စျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ တင်ဒါခေါ်သူများမှာ 14 ။ Eferay Eng ။ JV 00 TL + 1 € 228.554.966 ကိုဖျက်သိမ်းသည်။ Yenisay Eng ။ Cemiloğlu JV 73.115.281 TL …
Samsun အလင်းရထားဓါတ်ရထားလိုင်း Tool ကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရလဒ်များ (အထူးအစီရင်ခံစာ) 15 / 09 / 2015 Samsun Hafif Raylı Sistem Hattına Tramvay Aracı Alımı İhalesi Sonucu :Samsun Hafif Raylı Sistem Hattına Tramvay Aracı Temini İhalesi Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirildi. Samsun Hafif Raylı Sistem Hattına 8 Adet Tramvay Aracı Temini İşi ihalesinin teklifleri 14 Eylül 2015 tarihinde açıldı.RayHaber’in aldığı bilgiye göre İhaleye tek firma katıldı .Katılan firma ve teklifi (EUR) şöyle: 1-Durmazlar 1.538.960 EUR araç başına verilen
Eskisehir ဓါတ်ရထား Tool ကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရလဒ်များ (အထူးအစီရင်ခံစာ) 17 / 08 / 2016 Eskisehir ဓါတ်ရထား Tool ကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရလဒ်များ: သမိုင်း 2016 သြဂုတ်လ 220132 gerçekleştirildi.sözဘာသာရပ်အတွက် 28.455.000 ယူရို tramcars တင်ဒါနှင့် ပတ်သက်. Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် 10 / 2016 JCC နံပါတ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်နုနှစ်ခုကုမ္ပဏီတစ်ခုကလေလံအပ်ပေးတော်မူ၏။ RayHaber’in aldığı bilgiye göre ihaleye katılan firmalar ve teklifleri (€) şöyle: Skoda Taşımacılık A.Ş. 26.320.000 Euro Bozankaya Otomotiv A.Ş. 29.988.000 Euro
ကုန်စည်ဆုကို၏ (အထူးသတင်းများ) ပမာဏဓါတ်ရထား Tool ကို Konya BB 60, 58 1 အရေအတွက် Deray ကလောင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာပစ္စည်းဝယ်ယူရေး 12 / 09 / 2012 ကုန်စည် Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လမ်းရထား Piece Tool ကို 60 58 1 ကလောင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းအရေအတွက် Deray ဝယ်ယူပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 121077 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Merkez Mah ။ Vatan Cd ။ အမှတ်2Selçuklu / KONYA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3323551731 - 3323553745 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: satinalma@konya.bel.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည်: https://ekap.kik.gov ။ TR / ECAP / 2-တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်: တင်ဒါ ...
Konya ဓါတ်ရထားလေလံ Skoda! (အထူးသတင်းများ) 27 / 11 / 2012 အဆိုပါ 17 2012 အောက်တိုဘာလဖွငျ့ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လက်ရှိလမ်းရထားစင်းကို tramcars 60 ၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံဆီသို့ - အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတင်ဒါ၏ 58 ပစ္စည်းများကိုတစ် deray ခဲ့သည်။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီ Skoda မူရင်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေး Konya ဓါတ်ရထားလေလံ 104 700 တထောင်သန်းဒုတိယယူရိုလေလံအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကစည်ပင်သာယာထံမှလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရလေလံကုမ္ပဏီ၏ရလဒ်များကိုမှအကြောင်းကြားလာတယ်။ ထိုနေ့ရက်သည် 10 ၏ပျား၏တရားဝင်အကြောင်းကြားစာထံမှဆန္ဒပြပွဲများကုမ္ပဏီများပြီးနောက်ရလဒ်များနူးညံ့အယူခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုကန့်ကွက်ကာလပြီးဆုံးနှင့်တရားဝင်စံချိန်များ၏ကန့်ကွက်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအာဏာပိုင်များကအကဲဖြတ်ပြီးနောက်တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်နှင့်အတူအဆုံးသတ်မည်ဆိုပါက ...
အစ္စတန်ဘူလ် BB လင်းယုန် - Kaynarca Metro စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးကြီးကြပ်မှုအတိုင်ပင်ခံနှင့်အင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လြှပျစစျအကျင့်ကိုကျင့်တင်ဒါ၏ Pre-Selection ကိုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်စုဆောင်းခဲ့ကြ
GM ကတူရကီအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ဂျော်ဂျီယာ (Kars - Tbilisi) ကို GCC အတွက်မီးရထားစီမံကိန်း, မှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုပြန်လည်ထုတ်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီး
အဘယ်ကြောင့်ပိုးပု Bursa ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်လေလံသလဲ?
admin ရဲ့ ဟုသူကဆိုသည်:
ဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက် Durmazlar ကုမ္ပဏီများထံမှမလာဘဲ
အဆိုပါလေလံ scoda 104.700.000 eur'lıkအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်
Izmir Tram လေလံရလဒ်များကို (အထူးသတင်းများ)
Samsun အလင်းရထားဓါတ်ရထားလိုင်း Tool ကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရလဒ်များ (အထူးအစီရင်ခံစာ)
Eskisehir ဓါတ်ရထား Tool ကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရလဒ်များ (အထူးအစီရင်ခံစာ)
ကုန်စည်ဆုကို၏ (အထူးသတင်းများ) ပမာဏဓါတ်ရထား Tool ကို Konya BB 60, 58 1 အရေအတွက် Deray ကလောင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
Konya ဓါတ်ရထားလေလံ Skoda! (အထူးသတင်းများ)
KAYSERAY ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် Tool ကိုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရလဒ်များ (အထူးအစီရင်ခံစာ)
အမျိုးအစား (အထူးအစီရင်ခံစာ) အတွက်ကန်ထရိုက်တာ E43000 ပင်မတိုက်နယ်တနေ့လျှပ်စစ်စက်ခေါင်းလေလံရလဒ်များ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (394) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)